Kaalinta Uu Ka Qaadan Karo Hufnaanta Iyo Maamul Wanaagga Isla Xisaabtanka U Dhaxeeya Baarlaamanka Iyo Fulinta Hirshabeelle – Kalfadhi
September 6, 2018 September 6, 2018 Kalfadhi
Baarlamaanka Hirshabeelle kalfadhigooda afaraad oo furmay Luulyo 12-keedii 2018 waxa ay ugu magac dareen Kalfadhigii islaxisaabtanka, iyaga oo kulankii ugu horreeyey ee Kalfadhigooda Su’aalo ku weydiiyey guddoonka Baarlamaanka Hishabeelle.
Su’aalo weydiinta Guddoonka Baarlamaanka Hishabeelle waxaa xigay u yeeridda wasiiro ka tirsan Golaha Fulinta ee Maamulka Hishabeelle.
wasiirradda maaliyadda, ammaanka, cadaaladda iyo xubno kale oo ka mid ah Golaha Wasiirrada ee maamulka Hirshabeelle ayaa hortagay xildhibaannada ka hor ciiddii Carafo markaas oo ay xildhibaannadu fasax galeen.
Wasiirka maaliyadda ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle oo kulan su’aalo weydiin ah ay xildhibaannadu ugu yeereen 04-tii bishii Agoosto ayaa baarlamaanka hor yimid.
Waxa ay si gaar ah wax uga weydiiyeen, sida loo maamulo canshuuraha kasoo xaroorada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, sida loo maamulay miisaaniyaddii baarlamaanku ansixiyey, lacagaha kasoo xaroorada garoomada diyaaradaha ee Beledweyne iyo Jowhar iyo sida loo maareeyo qoondada Dowladda Federaalka ah ay siiso maamulka Hirshabeelle.
Wasiirka ayaa isku difaacay in ay Wasaaraddu ay ku guuleysatay mideynta cashuuraha labada gobol ee Hirshabeelle, tababaridda shaqaalahii ka shaqeyn lahaa canshuuraha, iyo in aysan jirin deeqo dibadda uga yimaada maamulka.
Tallaabooyinkii ugu waa weynaa oo isla xisaabtankaas ka dhashay waxaa ka mid ahaa in lakala diray dhammaan garsoorkii maamulka Hirshabeelle, bishii hore 6-deedii.
Wasiirka wasaaradda amniga iyo xubnaha kale ee maamulka Hirshabeelle ayaa sidoo kale wajahay Su’aalo la xiriira habsami u socodka shaqada wasaarada-hooda.
Iyadoo ay shaqadaas mugga leh ay wadaan Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxaa jira caqabado badan oo soo wajahaya, sida uu warbaahinta Kalfadhi u sheegay guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabbelle Shiikh Cismaan Barre Maxamed.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa rumeysan in shaqada baarlamaanka ay tahay mid bogaadin mudan isla markaana aysan joojin doonin in ay la xisaabtamaan mas’uuliyinta fulinta maamulka Hishabeelle, si ay u muujiyaan doorkooda Mataaladda Shacabka.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed
Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame oo ah guddoomiyaha Guddiga Turxaan-bixinta Su’aalaha Xildhibaannada ayaa sheegay in bogaadin ay mudan tahay shaqada Baarlamaanka Hishabeelle madaama ay la xisaabtamayaan mas’uulyiinta “ Isla xisaabtanku waa arrin u wanaagsan shacabka iyo dadka mas’uuliyiinta u ah, haddii uu yahay ammaanka, maaliyadda iyo shaqada kale ee maamulka waa sharci in la isla xisaabtamo, gaar ahaan Hirshabeelle, waaba dastuuri in la isla xisaaabtamo” ayuu yiri.
Waxa uu intaa ku daray “markii aan eegno Baarlamaanka Hirshabeelle, waxa uu u dhisan yahay, matalaadda shacabka, la xisaabtan mas’uuliyiinta iyo dajinta sharciga marka taas ayaaba keeneysa in xildhibaannadu ay door muhiim ah siiyaan la xisaabtanka waan arrin qaali ah oo aad u fiican ”
Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame
Xildhibaan Tariik Ibraahim Axmed oo kamid ah xildhibaannada haweenka ah ee ku jira Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa arrin muhiim ah ku tilmaamtay la xisaabtanka ay xildhibaannadu ku sameynayaan mas’uuliyiinta maamulka.
“ Tani waxay u horseedeysaa Baarlamaankeena iyo maamulkeenaba hore u socod, dhaqdhaaq shaqo iyo inaan waajibkeena u gudanno si hufan, caddaalad-na ah. Wasiirradana waa dad ku maqan shaqo waxa ay u maqan yihiin waa Hiishabeelle. Ayey tiri xildhibaanad Tariik.
Xildhibaan Tariik Ibraahim Axmed
Dr Xasan Shiikh Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka ayaan sidoo kale weydiinay isla xisaabtanka iyo kaalinta uu ka qaadan karo hufnaanta shaqo ee maamulka.
Waxa uu sheegay in door ahaan Baarlamaanku uu xaq u lee yahay in uu kormeer iyo la xisaabtan joogta ku sameeyo mas’uuliyiinta fulinta iyo xubnaha kale ee maamulka, taas oo horseedeysa in si dhameystiran ay shaqooyinkood u gutaan xubnaha fulinta.
“ Baarlamaanka Hirshabeelle wey ku ammaanan yihiin doorka ay ciyaarayaan maxaa yeelay haddii aad aragto sharci dajin oo la xisaabtameysa fulinta halkaas waxaa ka muuqata nidaam dowladnimo, laakiin hadii howsha sharci dajinta ay fulintu jeebka ku qaadato ma jiro nidaam dowladnimo ee waa qarin dumin” Ayuu yiri Dr Xasan Shiikh Cali.
Dr Xasan Shiikh Cali
Muddo ku dhow labo sano ayuu dhisan yahay Baarlamaanka Hirshabeelle, tan iyo waqtigaas waxa uu yeeshay afar kalfadhi oo uu ku jiro midka haatan furan ee baarlamaanku uu ugu magacdaray Kalfadhigii isla xisaabtanka.
Shaqooyinkii ugu waa weynaa ee baarlamaanku uu qabtay intii uu jiray waxaa ugu muhiimsanaa doorashada madaxweynaha Hirshabeelle oo laba mar ah, ansixinta wasiirada maamulka, meelmarinta miisaaniyadda maamulka iyo arrimo kale.
Aftida Kalfadhi: Bulshadu kuma qanacsana xildhibaannada ku matala Dowladda federaalka ah